Hay’adda Shaqalaha rayidka ah oo qaaday imtixaamka Madax-qaybeedyadii Shaqada iyo Shaqalaha – Radio Daljir
Maarso 12, 2016 6:50 b 0
Bacaadweyn, Maarso 12, 2016 (Daljir) —Hay’ada shaqalaha rayidka ah ee Dowladda Puntland (Puntland Civil Service Commission) oo qaaday imtixaankii Madax-qaybeedyada Shaqada iyo shaqaalaha ee Hay’adaha iyo Wasaaradaha ka faa’iidaysanaya mashruuca tayaynta iyo shaqo qorista ee uu Bangiga Aduunku maal-galinayo.
Dadka laga qaaday imtixaanka ee u tartamaya shaqooyinka bannaan ayaa ah dad u badan dhalinyaro aqoonyahan ah oo wax ku bartay jaamacadaha dalka iyo dibadda, waxaana lagu kala xulayaa aqoonta ay soo barteen iyo waayo-aragnimadooda la xiriirta shaqada.
Munaasabadii lagu daahfuray imtixaanka laga qaadayey dadkii shaqooyinka soo codsaday ayaa waxa goob joog ka ahaa laamaha kala duwan ee Dowladda Puntland ay u xilsaartay imtixaan qaadista.
Guddoomiyaha hay’ada shaqaalaha rayidka ah ee Puntland Mudane Mustafe Siciid Shabac oo daah furay imtixaanka ayaa sheegay in shaqooyinka ka bannaan Dowladda ee tartanka loogu jiro ay yihiin 9 boos, kuwaas oo uu sheegay inay imtixaam u galayaan 54 qof, waxaana dumar ahaa 22 qof, halka ragguna uu ahaa 22 qof.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in shaqooyinkan ay hore ugu soo bandhigeen bulshada Puntland, si dadweynuhu ay ugu wada faa’iidaystaan, Waxa uu intaasi raaciyey in tartanka caynkan ahi uu la mid yahay tartamada aqoonta ku dhisan.
Imtixaankani wuxuu qayb ka yahay balanqaadkii Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee ahaa in shaqooyinka dawladdu soo dhejiso ay dadku u sinnaan doonaan loona gelidoono imtixaam furan oo u dhaca si hufnaan iyo caddaalad ah.
Ugu dambayntii tartamayaashii ayaa loo qaybiyeey waraqadihii imtixaanka waxaana si dhow u ilaalinayey imtixaanka dad si gaar ah loogu soo xulay.
Madaxweynaha Puntland Muxuu kaga Hadlayay Khudbad-dii uu u Jeediyay Bulshada Minnepolis